အင်ဒိုနီးရှား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူကြိုကျောင်းတစ်ခုတွင် ယောက်ျားလေးကျောင်းသားတစ်ဦး စော်ကားခံရကြောင်း စွပ်စွဲမှုကြောင့် ကျောင်းပိတ်ရန် အာဏာပိုင်များ အမိန့်ထုတ်ပြန်
ပို့စ်တင်ချိန် - 4/23/2014 06:45:00 PM
ဂျကာတာရှိ Jakarta International School ၏ကျောင်းကို ဧပြီ ၂၁ ရက် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံ (Photo:AFP)
အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသော ဂျကာတာနိုင်ငံတကာ ကျောင်းတစ်ခုတွင် ခြောက်နှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေး ကျောင်းသားတစ်ဦးကို သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုပြုခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲမှု ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက် အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရက ယင်းကျောင်းကို ပိတ်ပင်ရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Jakarta International School တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ယင်းအမှုကြောင့် အင်ဒိုနီးရှား ပြည်သူတို့က ဒေါသထွက်ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပညာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကလေးသူငယ် အနိုင်ကျင့်မှု ဖြစ်ရပ်များ မြင့်တက်လာခြင်းကို အာရုံစိုက်မှု ရရှိစေခဲ့သည်။ ဂျကာတာတွင် ပြည်ပမှ လာရောက်နေထိုင်သူများ၏ မိသားစုမှ ကလေးများ အများစု တက်ရောက်သည့် ယင်းကျောင်းတွင် ကျောင်းသားငယ်သည် မကြာသေးခင် လများအတွင်းက သန့်စင်ခန်းအတွင်း၌ နှစ်ကြိမ်စော်ကားခံခဲ့ရကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြင်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အငှားခေါ်ယူထားသော သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမားနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး စော်ကားခဲ့မှုအတွက် မသင်္ကာသူများကို စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကျောင်းကို ပိတ်ထားရန် အာဏာပိုင်များက အမိန့်ထုတ်ထားကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းကျောင်းသည် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် မှန်ကန်သည့် ခွင့်ပြုချက် မရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောင်းပိတ်ရန် အမိန့်ရရှိထားကြောင်း သို့သော် ဇွန်လစာသင်နှစ်ကုန်ထိ ကျောင်းတွင်ကျောင်းသားများ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း Jakarta International School က အတည်ပြုခဲ့သည်။ ကလေးငယ်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုကြောင့် ကျောင်းများ၌ ကလေးများကို ပိုမိုကာကွယ်မှုပေးရန် တောင်းဆိုမှုများ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီး သမ္မတ ယူဒိုယိုနိုက ဓားစာခံကလေးငယ်၏ မိသားစုကို ပံ့ပိုးကြရန် ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကလေးငယ်များကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု ၃၀၀၀ ခန့်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျောင်းများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကလေးငယ်များ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကားဘတ်ထရီး ကြိုး မဖြုတ်ခင်ဘာလုပ်ရမလဲ?
ကိုယ်နံ့ပြင်းသူတွေ အတွက် အကောင်းဆုံး အကြံပြုချက်
ပိန်သွယ်စေဖို့ ဒီအချက်လေးတွေ ကြိုးစားကြည့်စို့
ပထမဆုံး တက်တူးထိုးမယ့်သူတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့အရာများ
အင်ဒိုနီးရှား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူကြိုကျောင်းတစ်ခုတ...
အွန်လိုင်းမှ ကမ္ဘာ့ဖလားလက်မှတ်ဝယ်ယူသူများကို ဆိုက်ဘ...
ဂျာမနီအသင်းကိုအားပေးမည့် အလုပ်သမားများကို အလုပ်ချိ...
သင်္ဘောဝမ်းဗိုက်အတွင်း ကတ်တာဖြတ်တောက်စဉ် ဖော့တုံးမျာ...
ဆရာမက အချစ်ကို ဒီလို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုလိုက်တယ်
ထောင်ထဲမှာ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက် ဦးဝင်းတင် ဘယ်လိုရပ်တ...
သင်မသိသေးတဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြောင်း အချက် (၁၀) ချက်
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် အမြင့်ဆုံးအပူခ...
တောင်ကိုရီးယား နစ်မြုပ်သင်္ဘော၊ သေဆုံးသူ ၁၂၉ ဦး ရှိပြီ
မျက်နှာအသားအရေနဲ့ မထိတွေ့သင့်တဲ့ အလှကုန်များ
လူဦးရေ ရှစ်သန်းနှင့် ဖရိုဖရဲ ရန်ကုန်
ဓာတ်ဆီ ကားနှင့် ဒီဇယ်ကား ဆိုတာ...
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဈာပနအခမ်းအနားအား ထောင်အတွင်းမှ...
အစိုးရ ထိုးစစ်တွေကို ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် ဝေဖန်
စင်ကာပူ-မြန်မာ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုစတင်
ဦးဝင်းတင် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနား နိုင်ငံတော်အကြီးအ...
ဘယ်သူ မိုက်ရူး သလဲ
ကိုရီယားသင်္ဘောနစ်မြုပ်မှု သေဆုံးသူ ၁၂၈ ဦးအထိ မြင့်တက်
သရက်ပင်ပေါ်တက်ကာ သရက်သီးခူးစဉ် ခြေချော်ပြုတ်ကျသဖြင်...
Virus Shield ကားအမည်ရှိ APP အား Google က Play Stor...
Pregnancy and Rubella ကိုယ်ဝန် နှင့် ဂျာမန်-ဝက်သက်
လမ်းအလယ်ပလက်ဖောင်းပေါ် ရပ်နေသူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို...
ကိုမိုးသီးဇွန်ခေါင်းဆောင်ကာ ဦးဝင်းတင် နောက်ဆုံးခရ...
မီးသီး မရှိလို့ပါ - ဟာသ
ယောင်္ကျား တန်ဆာ လိင်အင်္ဂါကို ချက်ပြုတ်ပြီး ဟင်းအဖြစ်...
တူမီးသေနတ်ဖြင့် သေကြောင်းကြံစည်သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြ...
ဆင်စွယ်များ တရား မဝင် ရောင်းချ ရာတွင် စင်ကာပူ သည် ...
စစ်ကျန် ၈၂ မမ ဗုံးသီးဟောင်း ခြောက်လုံးတွေ့ရှိ
အရွယ်မရောက်သေးသည့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို ၃ကြိမ် အဓမ...
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသော မြန...
အရပ်သားလုပ်ငန်းတွေမှာ စစ်တပ်နေရာ ဖယ်ပေးဖို့လိုကြော...
အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူးရာသီလမ်းပိတ်ပြီ ဖြစ်၍ ဘုရာ...
တောင်ကုတ်ဈေးညစောင့်ရဲ့ သားနှင့်သမက် ကားတိုက်သေဆုံ...
အမြန်လမ်းတွင် ပြည့်ဖြိုးအောင် ခရီးသည်တင်ကားမီးလောင...
လူငယ်လေးဦးက တက္ကစီကို လုယူထွက်ပြေး
ယူနတီသတင်းဂျာနယ်၏ (၇) ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းတွင် လ...
ရက်စက်လှသည့် အပြစ်ပေးမှုများပါဝင်သည့် အစ္စလာမ်မစ် ဥပ...
ဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့...
ရွှေမြန်မာလေကြောင်း (GMA)မှ လေယာဉ်က နိုင်ငံတော်သမ္မတ...